Budata Microsoft Office 2010 maka Windows
Budata Microsoft Office 2010
Free Budata maka Windows (1.00 MB)
Budata Microsoft Office 2010,
Na-ekwusara mbipute nke Microsoft Office 2010, Microsoft webatara sọftụwia kachasị amasị ya na ndụ azụmaahịa na ndị ọrụ nwere ọkwa dị mfe, na-aba uru ma ọsịsọ. Versionsdị Office ndị ọhụrụ ahụ, nke na-elekwasị anya na nkwukọrịta na netwọkụ mmekọrịta, na-achọ ị nweta ndụ ọrụ bara uru nke na -agide mmepe ahụ. E nyere gị igodo pụrụ iche na ibe ị na-aga wee budata Office 2010. Nwere ike ibudata Office 2010 site na ịbanye site na ibe a ma mezue usoro ndị dị mkpa Ihe kachasị mkpa nke Microsoft Office 2010 bụ na ị nwere ike iso ndị ọzọ gị na ha nwere ike ikwupụta echiche gị ma dozie nsogbu. Usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere ịnweta akwụkwọ Office gị site na ebe ọ bụla site na PC, weebụ ma ọ bụ smartphones. Microsoft Office Akụkụ ọzọ nke dị na ya bụ na ọ na-abawanye arụpụtaghị site na ịmekọrịta akwụkwọ gị. Nụzọ dị otú a, nagbanyeghị usoro ikpo okwu ị na-agbanwe na akwụkwọ gị. Ga-enwe ike ilele mgbanwe ndị ahụ noge ọ bụla.
Agbanyeghi na Microsoft Office nke ohuru kariri nke ugbu a ma nwekwaa otutu ihe, Office 2010 ka bu otu nime ihe ndozi nke ulo oru. Microsoft Office 2010, nke ọtụtụ ndị ọrụ hụrụ nanya, na-aga nihu na-adọta ndị ọrụ dị ukwuu site na ndị ọrụ nihi ịdị mfe ya na ịdị mfe nke iji ya.
Site na Office 2010, otu ngwugwu mmemme dị mkpa nke kọmputa anyị maka iji aka gị na azụmaahịa, ị nwere ike ịkwadebe akwụkwọ, ngosi, ihe ngosi mmịfe na tebụl data agwakọtara. Ikwesiri ị toa ntị na ihe ndị na-esonụ iji budata Office 2010, nke na-enye ngwaọrụ niile ịchọrọ.
Mara: Microsoft anaghịzi enye Office Office nkwado nkwado. Yabụ, site na enyemaka nke Zụrụ njikọ, ị nwere ike ịchọgharị nsụgharị nke Microsoft Office nke nwere ike ịdị gị mma.
Advanced nkecha interface
Sharingkekọrịta akwụkwọ ntanetị nịntanetị site na SkyDrive
Nkwado vidiyo PowerPoint
Chọrọ Microsoft Live paswọọdụ.
Microsoft Office 2010 Ụdịdị
Nha faịlụ: 1.00 MB